भेरी अस्पतालका दुई जना चिकित्सकमा कोरोना, डा. पाण्डे भन्छन्- ‘निको भएपछि प्लाज्मा दान गर्छु’ « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
भेरी अस्पतालका दुई जना चिकित्सकमा कोरोना, डा. पाण्डे भन्छन्- ‘निको भएपछि प्लाज्मा दान गर्छु’
२०७७, ९ भाद्र मंगलवार ११:०९ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, नेपालगन्ज । भेरी अस्पतालका दुई जना चिकित्सकलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । सोमबार स्वास्थ्यकर्मीमा गरिएको परीक्षणमा भेरी अस्पतालको प्रयोगशालाले उनीहरुको कोरोना पुष्टि गरेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै तरिकाले स्वाब परीक्षण गर्ने क्रममा दुई जना चिकित्सकमा कोरोना देखिएको प्रमुख जिल्ला प्रशासकीय अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । भेरी अस्पतालको मेडिसिन डिपार्टमेन्टका प्रमुख डाक्टर राजन पाण्डे र अर्का एक जना चिकित्सकमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
डाक्टर पाण्डेले फेसबुकमार्फत आफूमा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिँदै एक हप्ताभित्र आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई परीक्षण गराउन आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कोभिड–१९ को बिरामीहरुको उपचारमा रहँदा म पनि यसबाट अछुतो रहन सकिनँ । मसँग गत एक हप्ताभित्र सम्पर्कमा आउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले कोभिड–१९ को जाँच गर्नुहोला । म स्वास्थ्य लाभपछि प्लाज्मा दान गर्नेछु । मेरो रक्त समूह ‘ए पोजिटिभ’ हो ।’
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले भेरी अस्पतालका अरु स्वास्थ्यकर्मीको पनि जाँच गरिएको र उनीहरुको नतिजा मंगलबार बेलुकासम्म आउने जानकारी दिए । ‘फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छन्,’ उनले भने,‘सचेतता झनै अपनाउन जरुरी छ ।’ कान्तिपुरदैनिकबाट